5 avril 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Olivier Rakotovazaha - Magro 05 Avril 11
Samy nanasongadina ny artikla faha enina (6) ao amin’ny fehin-kevitra navoakan’ny Troika farany teo ireo mpandaha-teny rehetra, teto amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka, samy nanambara fa tsy nahazo fankatoavana iraisam-pirenena izany ny FAT.
I Victor Young avy amin’ny ankolafy Zafy Albert dia namaky bantsilana ny fanodikodinana ny hazo sarobidy bolabola any amin’ny faritra Analanjirofo, « ny tompon’andraikim-panjakana any an-toerana, miaraka amin’ny mpitandro ny filaminana » mihitsy no mangalatra ny hazo « andramena » hoy i Victor Young raha nanao tatitra tamin’ny vahoaka izy.Nomarihany fa hangataka fihaonana manokana amin’ny minisitra FAT izy hangata-panazavana momba io resaka io.
Olivier Rakotovazaha kosa dia nanambara fa ny marina ihany no lazaina sy tantaraina eo amin’ny kianjan’ny finoana. »Sambory aho raha lainga izao resahako izao » hoy izy raha nitantara ny fanonganam-panjakana sy ilay fehin-kevitry ny Troika izy.
I Zafilahy Stanislas dia nanohy ilay kabariny omaly, tsy maintsy miverina ny filoha Ravalomanana ary hirotsaka hofidiana indray hoy izy.Nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy vato misakana amin’ny fikatsaham-bahaolana hivoahana amin’ny krizy ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana satria ny vahoaka malagasy maro anisa no mitaky izany.
Jereo Photos Magro 05/04/2011 (1/2) miisa 10.
Jereo Photos Magro 05/04/2011 (2/2) miisa 10.
Auteur Solo RazafyPublié le 5 avril 2011 5 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique, Vidéos3 commentaires sur Sambory aho raha mandainga hoy Rakotovazaha Olivier !